Ukuxilonga > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Igazi likashukela: uwulungiselela kanjani umnikelo
Igazi likashukela: indlela yokulungiselela kahle ukulethwa Kumkhuba wezokwelapha, kunezivivinyo eziningi ezahlukahlukene. Zidluliselwa ukuze udokotela akwazi ukuqonda isithombe esijwayelekile sesi sifo noma ukumane ahlole isimo somzimba womuntu. ...
Ushukela (ushukela) kumchamo wesifo sikashukela. Sinikezela ngokufunda i-athikili ngesihloko esithi: "ushukela (ushukela) kumchamo wesifo sikashukela" nokuphawula kwabachwepheshe. ...
I-nephropathy yesifo sikashukela: izimpawu, izigaba nokwelashwa I-nephropathy yesifo sikashukela yigama elivamile ezinkingeni eziningi zezinso zesifo sikashukela. ...
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela kwabesifazane
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela kubantu besifazane Ukuze ushukela wegazi abuyele kwesejwayelekile, udinga ukudla isipuni esisodwa ekuseni ngesisu esingenalutho. ...
Isifo sikashukela esingakhokhelwe: siyini? Iqinisa izinga likashukela isikhathi eside Ibuyisela ukukhiqizwa kwe-insulin yi-pancreas BUFUNDI Bethu BENGCWELE! Ukwelashwa kwamalunga, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-DiabeNot. ...
Ukuhlolwa ushukela wegazi kanye nokujwayelekile kwalo
Izindlela zokuxilonga zesifo sikashukela se-LADA: ukuhlaziya ushukela okwenziwa kanye nokuhlelwa kwaso Inani elikhulu labantu namuhla libhekene nefomu leshukela likashukela. Lolu hlobo lokuphazamiseka alutholakali kusetshenziswa ukuhlola okujwayelekile kwe-serum glucose. ...
Izinketho zokunquma ushukela wegazi: amadivaysi ajwayelekile kanye nokuvela okusha ekhaya, kungenzeka ukuthola okuqukethwe ushukela wegazi ngezindlela eziningi. ...
Izindlela zokwehlisa ngempumelelo i-cholesterol ekhaya
Izindlela ezisebenzayo zokunciphisa i-cholesterol yegazi Emzimbeni womuntu, konke kufana empilweni yangempela. Kukhona abangane nezitha. Ngeshwa, abangane nabo kwesinye isikhathi baba babi. Lokhu kumayelana ne-cholesterol. Kuyavela ukuthi naye mubi futhi ulungile. ...
Ukushisa okuphezulu noma okuphansi kushukela
Ukushisa kwesifo sikashukela Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1 noma uhlobo 2 ziyadingeka ukuqapha izinga lokushisa komzimba nempilo ejwayelekile. Izinga lokushisa likashukela likhuphuka ngenxa yokwanda okukhulu kweglucose yegazi. ...
Imithetho yokulungiselela ukuhlolwa kwegazi elinama-biochemical
Ungayilungiselela kanjani iminikelo yegazi yokuhlaziywa kwamakhemikhali? Abantu abaningi bakholelwa ukuthi i-cholesterol iyinto eyingozi yomzimba. ...
IGlucometer Van Touch (Ukuthinta Okubodwa)
IGlucometer Van Touch (Omunye Ukuthinta) Wonke umuntu onesifo sikashukela uyazi ukuthi iyini i-glucometer. Le yithuluzi elincane elinikeza usizo olungenakufinyeleleka kumuntu one-metabolic pathology. ...
Izindlela zokunciphisa ushukela wegazi ngokushesha nangokuphepha
Ukwehla okusheshayo koshukela wegazi: izindlela zokupheka zemithi yesintu Ukwanda ushukela wegazi noshukela yizifo zanamuhla ezingakhula kumuntu ngamunye. ...
Ukufunda ukufunda imiphumela yokuhlolwa: ukuthi ushukela ukhonjiswa kanjani kuhlolo lwegazi
Ukuchazwa kwezimpawu ekuhlolweni kwegazi Imiphumela yokuhlolwa kwegazi ikhombisa izinkomba eziningi ezinamanani amanani. Kunemikhawulo ethile kuzinga lezimo zalezi zinkomba. ...
Sinquma izinga le-glycemia ekhaya - ulinganisa kanjani ushukela wegazi?
Ukuthola ushukela wegazi (ushukela) Idivaysi ekala ushukela wegazi ibizwa ngokuthi yi-glucometer. Kunamamodeli amaningi ale divayisi ahlukile ekucacisweni kobuchwepheshe nemisebenzi eyengeziwe. ...
Izinga likashukela egazini ngeminyaka emadodeni nakwabesifazane
Izinga likashukela wegazi ngeminyaka emadodeni nakwabesifazane Ukuqapha isimo sempilo somzimba wakho uqobo kuyisinyathelo sokuvimbela izifo eziningi ezingamahlalakhona. ...
I-Rinsulin® NPH (Rinsulin NPH)
I-Rinsulin r (Rinsulin r) - Imiyalo yokusebenzisa igama Lwamazwe omhlaba: I-Rinsulin r Ukwakheka nendlela yokukhishwa Isixazululo somjovo sinokusobala, asinombala. I-1 ml iqukethe i-100 IU ye-insulini yobunjiniyela bendabuko yabantu. ...
Ukunqunywa kwe-C-peptide kushukela
I-C peptide ne-insulini ku-mellitus yesifo sikashukela: ukwelashwa nokuhlolwa Izinga lama-peptides kushukela lesifo sikashukela libonisa ukuthi amangqamuzana e-beta e-pancreatic aphumelela kangakanani enza umsebenzi wawo we-insulin. ...
Yini okufanele uyenze uma ingane iphakamisile i-acetone emchameni wayo: izimbangela, ukwelashwa, ukuvimbela
I-acetone esivivinyweni somchamo ezinganeni imizuzu engu-10 Umbhali: I-Lyubov Dobretsova 1552 I-acetone esemchameni wezingane (ketonuria noma i-acetonuria) iyisimo esivamile. ...
Ukuhlolwa kokubekezelela kwe-glucose ngesikhathi sokukhulelwa: kuyadingeka?
Ungasithatha kanjani isivivinyo sokubekezelela ushukela lapho ukhulelwe? Ukukhulelwa kungenye yezigaba ezinzima kakhulu empilweni yanoma yimuphi umuntu wesifazane. ...